केबीलाई किवीले फर्कायो फाक्थेप
पौष १५, २०७५ | पाँचथर
काठमाडौं शहर बस्ने मान्छे । एउटा रुखको विरुवा नरोप्ने मान्छे तिमीहरुको जग्गा बिगार्छ किन राप्छौ ? भन्ने आरोप खेपिरहे तर तीनै व्यक्तिको अगाडि उदाहरणीय र प्रेरक बन्न पुगे केबी ।
आजभन्दा ११ वर्ष अघि पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउ“पालिका वडा नम्बर १ का के.बी. चेम्जोङ व्यापार गरी खान नेपालको राजधानी काठमाडौं हानिएका थिए । व्यापार व्यवसाय गर्दै काठमाडौंमा ९ वर्ष बिताए । त्यही व्यापारले उनी काठमाडौंमा परिचित भइसकेका थिए । व्यापार राम्रो चलेको थियो । इष्टमित्र चिनजान राम्रो बनाएका थिए ।
व्यापार गरेर राम्रो दाम कमाए पनि सामाजिक काम र नाम कहलाउन नसकिने पिरलोमा थिए । उनलाई एकदिन ब्रिटिसको लाहुर गएका गाउँले दाजुसँग भलाकुसारी गर्ने संयोग मिल्यो । त्यस्तैमा किबी फलको प्रसंगमा पुगे । उनले न्यूजिल्याण्डको कुरा ल्याए । त्यहाँ किबी भएको देख्दा आफ्नो गाउँ फाक्थेपमा पनि खेती लगाउने हो भने नेपालको न्यूजिल्याण्ड बन्न सक्छ भन्ने सल्लाह दिए ।
एकछिनको भलाकुसारीले के.बी. को मन आफ्नो जन्मथलो फाक्थेपमा आइपुग्यो । उनी बिस्तारै किबी खेतीको अध्ययन अनुसन्धानमा लागे । आफ्नो व्यापार चट्ट छोडेर एक वर्ष चाहिँ लागे किबी खेती कसरी गरिन्छ ? किबी कस्तो ठाउँमा फल्छ । किबी खेतीबाट कस्तो फाइदा हुन्छ ? यी र यस्तै कुराको खोजीमै बित्यो उनको एक वर्ष ।
त्यसपछि किबी खेतीलाई विस्तार गर्न गाउँ आए । गाउँमा किबी खेतीको विषयमा ६/७ जना साथीलाई सुनाए । तीन जनाले उनको कुरालाई इन्कार गरे । धान मकै फल्ने बारी बिग्रिन्छ । जंगल बिग्रन्छ । बाँझो हुन्छ । काठमाडौं शहरमा बस्ने मान्छे गाउँमा रुखविरुवा नै नरोपेको मान्छे के विश्वासले यो कुरा पत्यार लाग्नु । हुदैन गाउँकाले उल्लाए ।
तर वास्तवमा केबीले यस्तो सोचेका थिएनन् । १ वर्ष त अध्ययन नै गरेका थिए । आफ्नो ठाउँ किबी खेतीको लागि उपयुक्त छ भन्ने उनलाई विश्वास थियो ।
गाउँका साथीभाइले आफ्नो कुरा अस्वीकार गर्दा केबीको मनमा चिसो भयो । तर केबीले अठोट गरे यो काम गरेर देखाउँछु । उनको सल्लाह स्वीकार्ने साथी पनि थिए । त्यहीँ गाउँका भीम चेम्जोङले उनको कुरालाई समर्थन गरे । भीमको साथ पाएपछि केबीले पहिलो पटक ६ सय बोट किबीको विरुवा ल्याएर रोपे ।
भीमसँगै साथ लिएर उनले एउटा समूह पनि गठन गरे । जुन समूहको नाम रह्यो माहाभारा किबी तथा अर्गानिक कृषक समूह । समूह गठन गर्दा ३० घरका किसान आवद्ध थिए । समूहको अध्यक्षमा केबी नै बसे । आफ्नो गाउँमा किबी रोपाउनु छ । केबी किबी खेतीका लागि अहोरात्र लागे । दोलखा, काभ्रे, इलाम जिल्लाबाट बिरुवा ल्याउँदै रोपे ।
साथमा केबीको नेतृत्वमा रहेको महाभारा किबी तथा अर्गानिक कृषि समूहले अन्य खेती र व्यावसाय पनि गर्दै आएको छ । कसैले गाइ पल्छन् त कसैले सुँगुर फर्म, कुखुराफर्म कोही अन्य नगदे बालीमा छन् । साथसाथै किबी खेती पनि । दुई वर्ष भयो किबी खेती लगाएको । फल्न थाल्यो ।
आशा र उत्साह बढ्दै
उनको खिल्ली उडाउने केहीलाई देखाउनु थियो । किबी फल्न थालेसँगै खेती लगाउने किसानहरू बढ्न थाले । केबी अभिमुखमै छन् । केबीको समूहमा अहिले ६५ घरपरिवार आवद्ध छन् । पहिले खिल्ली उडाउनेहरू केबीलाई नै सल्लाह माग्न आउन थाले । उबेला चिसो लागेको केबी चेम्जोङको मन आनन्दले तातेको छ । किबी खेती लगाउने किसान दिनका दिन बढ्दै छन् ।
गाउँमा किबी खेतीको लहर नै चलेको छ । अहिलेसम्ममा उनको समूहले सामूहिक रुपमा नै १८ सय बोट किबी रोपे ।
खेतीयोग्य जमिन मासेर किबी रोप्न थालेका छन् । केबी आफैले पनि ४२ रोपनी जग्गामा १ सय ५१ बोट किबी रोपेका छन् । अहिले उनको समूहमा रहेका १५ घरपरिवारले व्यवसायिक रुपमै किबी खेती सुरु गरेका छन् । अनि उनको गाउँ फाक्थेप ८ मा मात्र लगभग २७ सय विरुवा रोपी सकिएको छ ।
सपना विपना भइदिदैछ, अझै लम्बिदै
आफ्नो गाउँमा किबी जोन हैन किबीको डाइमनल्याण्ड बनाउने धोको छ । दिनका दिन विदेशीने गाउँका युवालाई गाउँमै अड्याउनुछ । उनको सपना अनुसार किबी खेती फैल्याउन सके, एक परिवारले २५ बोट किबी रोपेर फलाउन सके छोरालाई अरब पठाउन नपर्ने उनको दावी छ । यूवालाई गाउँमै रोक्नु छ । केबी सामाजिक विकासका अभियान्ता बनेका छन् । केबीको टेक्नोलोजीलाई सबैले मान्दैछन् ।
किबीको बजार अस्तव्यस्त छ । सुन्तला, कागतीलाई जस्तो कोल्डस्टोर छैन । बजारमूल्यमा एकरुपता छैन । बजार मूल्यमा एकरुपता ल्याउन सरकारको चासो जानुपर्छ महाभारा समूहका किसानहरू भन्छन् । किबीको बजारीकरणमा राज्यको नजर पुगे किबी किसान प्रोत्साहित हुने अनुमान छ ।